Wararka Maanta: Sabti, July 14, 2012-Maamulka, Macalimiinta iyo Ardayda Jaamacadda Hiiraan oo u dabaal-dagay sanadkii labaad ee Aasaaska Jaamacadda (SAWIRRO)
Munaasabada oo aheyd mid loogu dabaal-dagayay sanad-guuradii labaad ee ka soo wareegtay waqtigii la furay Jaamacadda ayaa waxaa ka soo qeyb-galay marti sharaf isugu jirtay qeybaha bulshada oo ay ka mid ahaayeen dhaqaatiirta gobollka iyo qurba joog saameyn ku laheyd aas-aaska Jaamacadda.
Dr Xassan Cumar Siyaad oo ka mid ah maamulka Isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne kana mid ah macalimiinta wax ka dhigta Jaamacada ayaa siweyn u soo dhaweeyay heerka maanta ay mareyso Jaamacadda, isaga oo sheegay in durbaba la arki karo miriha wanaagsan ee mudada labada sano ah ka soo baxay Jaamacada.
‘’Runtii waxaa laga yaabaa in dad badan ay u heysteen in Jaamacadu aysan heerkan soo gaari karin, laakiin maanta waa la arkayaa halka ay wax marayaan, kaliya waxaan u baahannahay in aan horay uga sii socono halka aynu hadda taagannahay, ayuu yiri,’’ Dr Xassan Cumar Siyaad.
Max’ed Axmed Faarax ‘’Saney’’ oo ah madaxa shirkada korantada Dayax ee gobollka kuna hadllayay magaca aqoonyahannada,, ayaa bogaadiyay maamulka, macalimiinta iyo guud ahaanba cid kasta oo gacan ka geystay sidii gobollka Hiiraan looga hergalin lahaa Jaamacad ay wax ka bartaan ardeyda ka soo baxda dugsiyada sare ee gobollka, kuwsoo markii hore u tagi jiray gobollada kale ee dalka sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho dhameystiran.
"Waxaan leeyahay cid kasta oo ku lug leh Jaamacadda waa in aad horay uga sii dhaq-dhaqaaqdaan halka aad maanta taagan tihiin, waayo suugtagal ma’aha in maalin kaliya wax walba soo dhamaadaan, laakiin waxaan oran karnaa marka loo eego waqtiga adag ee lagu jiro Jaamacaddu waxaa ay muujisay dadaal dheerad ah," ayuu yiri Maxamed Axmed Faarax.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadllay madaxa Jaamacada Hiiraan University Cismaan Max’ed Cilmi (Caato) oo uga mahad celiyay Jaaliyada W/qooyiga Ameerica iyo Yurub hindisahoodii ku aadanaa in gobollka Hiiraan Jaamacad laga hergaliyo, isaga oo intaa ku darray in waqtigan ay isa soo diiwaan galinayaan ardey cusub oo ah kuwa soo dhameysatay Dugsiyada sare ee gobollka taasoo muujineysa ayuu yiri heerka aqoonta Jaamacadda oo mudadii labada sano aheyd oo ay jirtay.
Ugu danbeytii waxaa halkaa shahaado lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalimaha kuwaad iyo labaad ka gashay Imtixaankii sanadka labaad oo ay ardayda Jaamacadu u farsiiteen, waxaa wajiyada ardeyda ka muuqatay dareen farxadeed maadaama ay sanadkii labaad soo dhameysteen waxbarashada Jaamacadda.
Jaamacadda Hiiraan Uninversity oo si rasmi ah loo furay sanadkii 2010, waxaa ka baxa sadax kuliyadood oo kala ah Caafimaadka, Shareecada, IT, cilmiga kambiyuutarka, iyadoo la filayo in lagu soo kordhiyo dhaawaan kuliyadaha kala ah beeraha iyo ganacsiga.